Ogaden News Agency (ONA) – Nabad-sugida Kenya oo Xad Gudubyo Banad Lagu Eedeeyay.
Nabad-sugida Kenya oo Xad Gudubyo Banad Lagu Eedeeyay.
Posted by Dayr	/ December 15, 2017
Hey’ada Xuquuqda Aadanaha u dooda ee Human Rights Watch (HRW) ayaa sheegtay in intii lagu guda jiray doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ka dhacday sanadkan, ay ciidanka boolisku kufsadeen tiro haween ah isla markaana jidhdil u gaysteen dad rayid ah.
Warbixin cusub oo ay soo saartay HRW, ayay ku sheegtay inay dhaceen xadgudubyo baahsan oo dhinaca galmada ah oo loo gaystay dumar.Waxaa kale oo ay ku eedeeysay ciidanka booliska, in ay awood xad-dhaaf ah u adeegsadeen dad mudaaharaadaayay.
Jidhdil, dhac iyo dil badheedh ah ayaa ka mid ahaa danbiyada ay Human Rights Watch ku eedeysay ciidamada booliska ee dalka Kenya. Taliyaha ciidanka booliska Kenya Joseph Boinnet, ayaa ku tilmaamay warbixintan been lasoo dhoodhoobay. Wuxuu ugu baaqay Human Rights Watch in ay keento caddeymo la taaban karo.